ရန်ကုန် တိရစ္ဆာန်ရုံကို လှော်ကားသို့ အစိုးရ ပြောင်းရွှေ့လို | ဧရာဝတီ
ရန်ကုန် တိရစ္ဆာန်ရုံကို လှော်ကားသို့ အစိုးရ ပြောင်းရွှေ့လို
ရန်ပိုင်| February 4, 2013 | Hits:3,966
| | ရန်ကုန် တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ် (globaltravelmate.com)
အရှေ့တောင်အာရှတွင် သက်တမ်းအရင့်ဆုံးထဲ၌ ပါဝင်သော ရန်ကုန် တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကို ဖျက်သိမ်းကာ ပန်းခြံ (Green Park) အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုကြောင်း သမ္မတရုံး ၀န်ကြီး ဦးစိုးသိမ်းက ယမန်နေ့က မီဒီယာများနှင့် နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံရာတွင် ပြောဆိုလိုက်သည်။
နှစ် ၁၀၀ ကျော်လာပြီဖြစ်သော ရန်ကုန် တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သည် လူနေထူထပ်သည့် မြို့လည်တွင် တည်ရှိရာ အများပြည်သူ ကျန်းမာရေးအတွက် မသင့်လျော်ကြောင်း၊ ထို့အတွက် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ လှော်ကား သဘာဝဥယျာဉ်သို့ ပြောင်းရွေ့လိုကြောင်း၊ ပြောင်းရွေရန် သင့်၊ မသင့် ပြည်သူဆန္ဒကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးစိုးသိမ်းက ပြောဆိုသွားသည်။
ကိုလိုနီခေတ်တွင် ဝိတိုရိယ အောက်မေ့ဖွယ် ပန်းခြံနှင့် တိရစ္ဆာန် ဥယျာဉ် ဥပဒေအရ ၁၉၀၆ ခုနှစ်က တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု ခဲ့သည့် တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်အတွင်း တိရိစ္ဆာန်များ ယင်းတို့ သဘာဝနှင့်အညီ ကျက်စား နေထိုင်နိုင်ရန် အဆောက်အအုံများ၊ သစ်ပင်များကိုပါ စနစ်တကျ ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးထားပြီး၊ ကျားများ ထိန်းသိမ်းသည့် အဆောက်အအုံနှင့် တချို့သော အဆောက်အဦးမှာ ရှေးကျသည့် အဆောက်အဦးများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၁၉၅၁ တွင် “ရန်ကုန် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ပန်းခြံ” ဟူ၍ အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက “ဒီလိုသက်တမ်းရင့် တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကို ဖျက်မယ်ဆိုတာတော့ လက်မခံနိုင်ဘူး။ တခြားနိုင်ငံတွေက တိရိစ္ဆာန်ရုံတွေ မနေ့တနေ့ကမှ ဆောက်တာ။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ဒါမျိုးရှိတာ ဂုဏ်ယူဖို့တောင် ကောင်းသေးတယ်” ဟု ဆိုသည်။
တိရိစ္ဆာန်မှ ထွက်ရှိသည့် အနံ့အသက်များ ရှိလျှင်လည်း သန့်ရှင်းရေးစနစ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်ရမည်မှာ အစိုးရ၏ တာဝန်သာဖြစ်ကြောင်း၊ သန့်ရှင်းရေးစနစ် ကောင်းမွန်ပါက ဤသက်တမ်းရင့် တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သည် နိုင်ငံခြားခရီးသွားများကိုပင် ဆွဲဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ရန်ကုန်မြို့ခံက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သည် အနယ်နယ်အရပ်ရှိ မိသားစုများ၊ ကျောင်းသားလူငယ်များ တိရိစ္တာန်များနှင့် အပင်များ၏ သဘာဝကို ဗဟုသုတရရှိစေရန်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းတတ်စေရန် လေ့လာရာ နေရာတခုဖြစ်သည့်အပြင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မျိုးတုံးတော့မည် ရှားပါသတ္တ၀ါတချို့ကိုလည်း စုဆောင်းပြသထားသည့် နေရာဖြစ်သည်။
ယခင်က ရန်ကုန် တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သည် ရွှေတိဂုံဘုရား၊ ကန်တော်ကြီးစသည့် ထင်ရှားသောနေရာများကဲ့သို့ မိသားစု အားလပ်ရက် အပန်းဖြေသွားရောက်သည့် နေရာတခုဖြစ်ခဲ့သည်။
ခေတ်အဆက်ဆက် သစ်တောဝန်ကြီးဌာနမှ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခဲ့သော ရန်ကုန်တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် စစ်အစိုးရက ဦးတေဇပိုင် ထူးကုမ္ပဏီကို ငှားရမ်းခဲ့သော်လည်း တိရိစ္ဆာန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်အသစ်များ ၀ယ်ယူခြင်းကို သစ်တောဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးကြောင်း သိရသည်။
တိရိစ္ဆာန်ရုံ ၀န်ထမ်းဟောင်းတဦးက “တိရိစ္ဆာန်တွေ လှော်ကားကိုပြောင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီအတိုင်းစည်ရိုးကာပြီး လွှတ်ထားလို့ မရတဲ့အတွက် သူတို့နေနိုင်အောင် ဆီလျော်တဲ့ဝန်းကျင် ဖန်တီးပေးရမယ်။ အဲဒီအတွက် ဘတ်ဂျက်ကုန်မယ်။ နောက်တခုက လာကြည့်မယ့်သူတွေ အဝေးကြီးကို လာကြည့်ပါ့မလားဆိုတာ စဉ်းစားရမယ်” ဟု ထောက်ပြသည်။
ထို့အပြင် တိရိစ္ဆာန် ဥယျာဉ်နှင့် သဘာဝဥယျာဉ် ဘေးမဲ့တောမှာ သဘောတရား မတူကြောင်း၊ တိရိစ္ဆာန်ရုံအတွင်းနေ သတ္တ၀ါများမှာ ရေနေ၊ ကုန်းနေ ခွဲခြားကာ ဂရုတစိုက်မွေးမြူထားသည့် သတ္တ၀ါများဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကို ထူးကုမ္ပဏီထံမှ လွှဲပြောင်းရယူပြီး ပိုမိုတိုးတက်အောင် လုပ်သင့်ကြောင်း အဆိုပါ ၀န်ထမ်းဟောင်းက ပြောသည်။
ရန်ကုန် တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွင် ငါးပြတိုက်၊ သဘာဝသမိုင်း ပြတိုက်များအပြင် တိရိစ္ဆာန် မျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သိရသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောပညာရှင် ဦးအုန်းက ရန်ကုန်တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကို ပန်းခြံ (Green Park) အဖြစ် ပြောင်းလဲမည်ဆိုသည်ကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း၊ အမျိုးသားအမွေအနှစ်တခုအဖြစ် ဆက်လက်ရှိသင့်ကြောင်း ဆိုသည်။
“ရှိပြီးသားကို ကောင်းအောင်လုပ်တာ လက်ခံနိုင်တယ်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ အားရက်ဆို မြွေတွေ၊ ဆင်တွေ ပြတာ၊ ကျားတွေကို ကလေးတွေ လာကြကြည့်ကြ ပျော်ဖို့ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ အဲဒါကို အာဏာပိုင်က တန်ဖိုးထားသင့်တယ်” ဟု ပြောသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ တိရိစ္ဆာန် ဥယျာဉ်ကို ဝေးလံသောဒေသသို့ မပြောင်းရွေ့သင့်ကြောင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းစိုမှု ကို လိုလားပါက ပြည်သူဥယျာဉ်၊ ပြင်ဦးလွင် ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်အပါအ၀င် တခြားသော အမျိုးသားဥယျာဉ်များနှင့် ဘေးမဲတောများကို သေချာထိန်း သိမ်း သင့်ကြောင်း ထောက်ပြဝေဖန်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရန်ကုန်တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ် တခုတည်းသာရှိခဲ့သော်လည်း စစ်အစိုးရက ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် မန္တလေး၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နေပြည်တော်တို့၌ ထပ်မံတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထို့အတွက်လည်း ရန်ကုန်တိရိစ္ဆာန် ဥယျာဉ်မှ တိရိစ္ဆာန်အချို့ကို နေပြည်တော် တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရသည်။
ပျူမြို့ဟောင်းများ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ဖြစ်လာခဲ့ပြီပျူမြို့ဟောင်းများ မြေယာရှုခင်း ပြင်ဆင်ရေး ထိုင်း ကူညီမည်ရန်ကုန် ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု မြို့ပြအမွေအနှစ် ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ရေးဆွဲရန် အစီအစဉ်မရှိသေးရေစီးကြမ်းမှုကြောင့် ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်း ဆယ်ယူမှု အခက်ကြုံစစ်ကိုင်း မဟာသိမ်တော်ကြီး နံရံဆေးရေး ပန်းချီများ ထိန်းသိမ်းရေး ထိုင်း ကူညီမည်
pps၁၂၃၄၅ February 4, 2013 - 7:16 pm ကိုစိုးသိန်း ခင်ဗျားက ချမ်းသာ တယ်ဗျ။ (ခင်ဗျား ချမ်းသာတာ မနာလို၍ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ)
ခင်ဗျားသားကို ၁၀ တန်းအောင်တာနှင့် စကာင်္ပူ ပို့နိုင်တယ်။
ခင်ဗျားသမီးကို ၁၀ တန်းအောင်တာနှင့် အင်္ဂလန် ပို့နိုင်တယ်။
ကျွန်တော် တို့လို ဆင်းရဲတဲ့ လူတွေ အတွက် ရန်ကုန်မြို့လယ် က ဒီ တိရိစ္ဆာန်ရုံ ကို မြေးတွေ သွားပို့ရတာတောင် အနိုင်နိုင်ပဲ။ တက်ဆီခ ဈေးကြီးတာနဲ့၊ လမ်းပိတ်တာနဲ့။
ခင်ဗျား ကျွန်တော် တို့လို ဆင်းရဲသားတွေရဲ့ နောက်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေကို အသိပညာမဲ့အောင်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။
ကျွန်တော် တို့ ကျွန်တော် တို့ နောက်မျိုးဆက်တွေကို ပြည်တွင်း ပညာရေး နှင့် အသိပညာ ပဲ အမွေပေးနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လို ဆင်းရဲသားလူထုကြီး ၊ဝန်ထမ်းထုကြီး အတွက် စာနာပေးပါ။
Reply minko February 4, 2013 - 7:58 pm ဒီဝန်ကြီးဆိုတဲ့လူတွေ -ဘာမှ မသိဘူး-ငွေရဘို့ ဘဲသိတာ- မြေနေရာကို ဘယ်ကုမ္ပဏီ ရောင်းစားမလဲ မသိဘူး- ငွေရလို့ ကတော် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးတောင် ရောင်းချင် ရေားမည့်သူတွေ-
Reply Mann February 5, 2013 - 11:20 am အမှန်ဘဲဗျို့…..
Reply thihamin February 5, 2013 - 10:00 am အမှန်တကယ် ပြောင်းသင့်တာက မောင်မင်းသိန်းစိန်တို့ရဲ့ အစိုးရတဖွဲ့လုံးပါဘဲ။
Reply khin February 5, 2013 - 11:02 am ပန်းခြံမဖြစ်ပဲကွန်တိုတွေဖြစ်မယ်ထင်တယ်
Reply Mann February 5, 2013 - 11:35 am ဟိုဟာရောင်းစားမယ် ဒီဟာရောင်းစားမယ် ဆိုတာ ဘဘရွှေလက်ထပ်သင်ပေးခဲ့တာဘာ၊ သားသားတို့မှာအပြစ်မရှိပါဘူးဂျာ…..
Reply ဗမာ February 5, 2013 - 2:56 pm ဟုတ်ပါ့။ ဒီစိတ်ဓါတ်တွေအာဏာပိုင်တွေထဲမှာ အရိုးစွဲနေတာကြာလှပေါ့။
Reply မြန်မာပြည်သား February 5, 2013 - 9:09 pm ဆန်ရှင် ဖွင့်တုံး လုပ်ပိုင်ခွင့် ရတုံး ထပ်လုပ်ထားမှ ။
ဒါမှ ကော်မရှင် ကြေးတွေနှင့် သားသမီးတွေ နာမည် နှင့် ဖွင့်ထားတဲ့ အကောင့်တွေမှာ ပန်နီ များများ ထည့်နိုင်မှာ
Reply han han February 6, 2013 - 3:02 pm Better keep zoo in Yangon, Because, near Shwedagon, Kandawgyi Park, Karaweik, Sule, local River port , Dala township and next Econimic zone. and Yangon city etc ,,.
If change something to do there !!! will bealot of traffic,and people !!!!!!!!!!!!!!!!!etc,,,,,,,,,,,,,, .